बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा नेकपा एमालेको प्रचारप्रसार तीव्र » Khulla Sanchar
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा नेकपा एमालेको प्रचारप्रसार तीव्र
नेपालको ईतिहासमा पहिलोपटक सम्पन्न हुन गईरहेको स्थानिय तहको निर्वाचनमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा नेकपा एमालेको स्थिती निकै मजबुत देखिएको छ । नेकपा एमालेले छनौट गरेका उम्मेदवारहरुको छवि, क्रियाशिलता, विगतको भूमिका र आगामी दिनमा गर्ने कार्यको स्पष्ट खाकाको प्रस्तुतीले नेकपा एमालेलाई विजयको नजिक पु¥याएको छ ।
विभिन्न वडाहरुको स्थलगत अवस्थाको अध्ययन गर्दा १३ वटै वडाहरुमा नेकपा एमालेले विजय प्राप्त गर्ने देखिएको छ । यस नगरपालिकाको करिब एक तिहाई मतदाता रहेका वडा नं. १०, ११ र १२ मा वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरु नवराज भट्टराई, राजु अधिकारी र शम्भु भट्टराई निकै अगाडी देखिएका छन् भने वडा नं. १३ मा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जीत निश्चित प्रायः छ । नेकपा एमालेले कपनबाट बौद्धिक एवम् सक्रिय महिला रमा राईलाई उपमेयर पदमा उम्मेदवार बनाउनु पनि एमालेको बुद्धिमतापुर्ण निर्णय देखिन्छ ।
अन्य वडाहरुमा पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु निकै अगाडी देखिएका छन् । जसले गर्दा नेकपा एमाललेले मेयर, उपमेयरसहित बहुमत वडाहरुमा विजय प्राप्त गर्ने निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक सुन्दर पुर्कुटीले बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले बूढानीलकण्ठले आफ्नो सम्पुर्ण प्रचारप्रसारको ध्यान साविक कपनमा केन्दि«त गरेको छ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १०, ११ र १२ रहेको सो स्थानमा अत्यधिक रुपमा एमालेको पक्षमा जनलहर देखिएको छ ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरपदका उम्मेदवार उद्धव खरेल तथा उपमेयरकी उम्मेदवार रमा राईसहितको बूढानीलकण्ठ वडा नं. १० को ¥यालीमा हजारौँ जनताहरु सहभागी भएका थिए । सो ¥यालीपश्चात् कोणसभामा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले क्षेत्र नं. ४ का अध्यक्ष कुसुमकुमार कार्कीले भने– हिजो रहेका ६ वटै गा. वि. स. का अध्यक्षहरुको एक रुप हुन् उद्धव खरेल । बाहिर जुन हल्ला फैलाईएको त्यो नितान्त कपोकल्पित र मिथ्या हो । हामी सबै यो मोर्चामा एकसाथ रहेका छौँ ।
त्यस्तै साविक कपन गा.वि.स.का अध्यक्ष मीठाराम अधिकारीले अब एमालेलाई बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कुनै पनि शक्तीले रोक्न नसक्ने दाबी गरे । उनले थपे – हामी सबै एकमत, एकजुट भएर कमरेड उद्धव खरेलको अगुवाईमा यो नगरपालिकाको निर्माणमा लाग्ने छौँ । नेकपा एमालेले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नंं. १०, ११ र १२ मा विजय प्राप्त गर्ने प्रायः निश्चित देखिएको छ
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राजु श्रेष्ठ र नेकपा माओवादी केन्द«का तर्फबाट रविन अधिकारी मेयर पदका उममेदवार रहेका छन् ।
आजै २ बजे वाग्मती प्रदेशसभाको अर्को बैठक बस्ने